राम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्ता छन् उपायहरु ! जानी राखौ – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीराम्री युवतीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्ता छन् उपायहरु ! जानी राखौ
December 12, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 14589
तपाईंको आँखीभौंको बीचमा रौं छ ? अर्थात तपाईंको आँखीभौं भद्दा खालको छ ? आजको समयमा यस समस्याबाट छुटकारा पाउन कुनै गाह्रो छैन । चाँडो भन्दा चाँडो यस समस्याबाट मुक्त हुनुहोस् । आफ्नो आँखीभौंको हप्तामा एक पटक सफा गर्नुहोस् र यस समस्याबाट मुक्त हुनुहोस्।
तपाईंको छालामा समस्या छ भने यसबाट बच्न दैनिक आफ्नो अनुहार राम्रो फेसवासले धुने गर्नुहोस् । साथै यस कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस् की सबै त्वचा एकै प्रकारका हुँदैनन्, यसर्थ फरक फरक तरिकाले उपचार गर्नुहोस् । यदी कुनै प्रकारको समस्या आए तपाईं तुरुन्त विशेषज्ञ चिकित्सकको सहयोग लिनुहोस्।
मेरो बिहे भएको ३ बर्ष भयो अझै श्रीमानसँग सम्पर्क भाको छैन, अब के गर्नेहोला !
February 17, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 17083
मोबाइल फोनमा वि स्फोट हुँदा एक १४ वर्षीया किशोरीको मृत्यु भएको छ । मृतक युवतीले आफ्नो फोन चार्जमा राखेर सिरानीमा राखेकी थिइन् । उनी सुतिरहेको अवस्थामा फोन अचानक वि स्फोट भएको हो । यो घटना
December 5, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10665
December 12, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 14454
करुणाजी मेरो बिहे भएको ३ बर्ष भयो मलाईं श्रीमान ले अहिले सम्म पनी से’क्स भाको छैन, अब के गर्नेहोला ? करुणा जीको प्रश्नकर्तालाई दिएको उत्तर यस्तो रहेको छ । हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे
LEX 18 agenda conversation: Job club (445109)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418675)
Hello world! (345995)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318788)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115327)